Cool Domains for Sale: - Ratos.co, PhPhT.co, ConfidentZ.com, beautiful.services, VRrisk.com, CreditCard.rip, prees.co,
Chrome on WindowsToobiye: F10/Alt ➡ Enter ➡ S
Riix badhanka ah Customize and control Google Chrome (Icon la Mire Waqaf oo 3 khadadka siman) si xaq ah bar cinwaanka, ka dibna dooro Settings ka menu hoos-hoos ah.
Qeybta hoose ee ah Settings bogga, riix Show advanced settings... link.
Hit ah Content settings... button ka yar Privacy group.
Fiiri Apple/System qataara sare ee shaashadda, ka dibna riix ka Chrome item; soo socda dooro Preferences... ka menu hoos-hoos ah.
Qaado Settings item liiska bidix, hoose ee Settings bogga, riix Show advanced settings... link.
Under Privacy koox, ku dhufatey Content settings... button
Click icon ee 3 Mire Waqaf oo god oo ka buuxiyeen inay xaq u of bar cinwaanka (ama saxaafadda Menu muhiimka ah ee qalabka Android), ka dibna dooro Settings ka menu hoos-hoos ah.
Kitaabkii duudduubnaa Settings page si hoose, iyo taabo Content settings... horyaalka.
Isku day in aad u raaxayn aad browser si loo arko haddii aad xaq u samaynaya.
Click icon ee 3 Mire Waqaf oo khadadka siman dhinaca midigta ee bar cinwaanka ka dibna dooro Settings ka menu hoos-hoos ah.
Kitaabkii duudduubnaa Settings page si hoose, iyo taabo horyaalka ayaa sheegay in Content settings...
Asal ahaan, waxaan u malaynayaa in haddii aad choosed Linux si ay u isticmaalaan, laga yaabee in aad ku fiican oo ku filan si ay u ilaaliyaan wax walba si fiican u shaqeeyaan. Dhab ahaantii aad u ogaato sida aad u bedeli Google Chrome configs / preferrences badan sida aad rabto.
So annagu ma aad ee halkan hanuunin.Salaan